तपाईंको म्याकको ब्लुटुथ मोड्युल पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग जडान समस्याहरू छन् म म्याकबाट हुँ
तपाईंको म्याकको ब्लुटुथ मोड्युल पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग कनेक्शन समस्याहरू छन्
सम्भवतः तपाईसँग दैनिक उपकरणमा ब्लुटुथमा धेरै यन्त्रहरू जडान गरिएको छ, तपाईंले यसलाई याद पनि गर्नुहुने छैन, किनकि तपाईंले तिनीहरूलाई पहिलो पटक जडान गर्नुभयो, र त्यसपछि उनीहरूले समस्या उत्पन्न गरेनन्। हामी किबोर्डहरू, चूहों, ट्र्याकप्याडहरू वा स्पिकरहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं। तर यदि तिनीहरूसँग जडान समस्या हुन सुरू हुन्छ, जुन म्याकमा असम्भव छ, तपाईंले ब्लुटुथ मोड्युल रिसेट गर्नु आवश्यक पर्दछ।
यो चरण गर्नु अघि, हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं कि तपाईंले जोडिएको परिघ बन्द गर्नुहोस्, पावर हटाउने विन्दुमा, या त विद्युत् प्रवाह वा स्तम्भहरू र फेरि पछाडि यसको जोडा बनाउने प्रमाणित गर्न। यदि यो समाधान गर्दैन भने, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्।
पहिले, याद गर्नुहोस् कि iMac वा म्याक मिनीको कुञ्जीपाटी ब्लुटुथ, साथै माउस वा ट्र्याकप्याडद्वारा जडान गर्न सकिन्छ। यसैले, तपाईंसँग यी बाह्य उपकरणोंको प्रतिस्थापन हुनुपर्दछ, केबल जडानद्वारा यस अवस्थामा, किनभने रिस्टार्टको बखत तिनीहरू अफलाइन हुनेछन्। यदि तपाईंले यसलाई ध्यानमा राख्नु भएको छ भने, तपाईं फेरि सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ।
पहिलो, ब्लुटुथ प्रतीक मेनू पट्टी मा देखा पर्दछ। यदि तपाईंसँग यो छैन भने, यो बिन्ती गर्न तपाईंले निम्न चरणहरू गर्नुपर्दछ:
जाऊ त्यहाँ प्रणाली प्राथमिकताहरू.
चयन गर्नुहोस् ब्लुटुथ।
पप-अप विन्डोमा, विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् जुन तल देखिन्छ: मेनू पट्टीमा ब्लुटुथ देखाउनुहोस्। ब्लुटुथ प्रतीक अब टास्कबारमा देखा पर्नेछ।
त्यसोभए तपाईंले गर्नै पर्छ लुकेका ब्लुटुथ मेनू अनुरोध गर्नुहोस्. सिफ्ट र विकल्प (Alt) कुञ्जीहरू थिच्दा, मेनु पट्टीबाट ब्लुटुथ प्रतीक चयन गर्नुहोस्।
कुञ्जीहरू छोड्नुहोस् र तपाईं लुकेका मेनू देख्नुहुनेछ।
विकल्प पहुँच गर्नुहोस् डिबग.
विकल्प छान्नुहोस् ब्लुटुथ मोड्युल रिसेट गर्नुहोस्।
अन्ततः, तपाईको म्याक पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्।
एक पटक रिबुट गरेपछि, उपकरणहरू बीच कुनै पनि संचार समस्याहरूको समाधान हुनुपर्दछ।
डिबग मेनूसँग दुई थप विकल्पहरू छन् जुन अब हामी टिप्पणी गर्नेछौं: सबै जडित एप्पल उपकरणहरूमा कारखाना सेटि toहरूमा पुनःसेट गर्नुहोस्। यस अवस्थामा, कृपया एप्पलको सबै सामानहरू कारखाना सेटि settingsहरूमा पुन: भण्डारण गर्नुहोस्। यो एक रमाईलो विकल्प हो, यदि तपाईंले सफलता बिना अघिल्लो चरणहरू गर्नुभयो भने।
अन्ततः, सबै उपकरणहरू मेटाउनुहोस्, यो उपयोगी छ जब हामी सबै उपकरणहरू अनलिink्क गर्न चाहन्छौं, कनेक्शन समस्याको कारण वा अर्को नजिकको म्याकमा लिंक गर्न र हस्तक्षेपबाट बच्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » धेरै » तपाईंको म्याकको ब्लुटुथ मोड्युल पुनःस्टार्ट गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग कनेक्शन समस्याहरू छन्
कुञ्जीपाटीले मेरो लागि काम गर्दैन, यदि माउस छ भने। म कसरी डिबग मेनू पहुँच गर्न सक्दछ यदि मैले (मे) पछाडि (Alt-विकल्प) टाइप गर्न सक्दिन?
एलेना फेडेज। भन्यो
र यदि ब्लुटुथ विकल्प प्राथमिकता प्यानल बाट गायब भयो ????
एलेना फेडेजलाई जवाफ दिनुहोस्।
एन्ड्रेस सालदारियागा भन्यो
मेरो इमेक अचानक ब्लुटुथ निष्क्रिय गर्दछ र केहि क्षणको लागि एक दिन ... के तपाईंलाई थाहा छ किन त्यो हुन्छ?
एन्ड्रेस सालदारियागालाई जवाफ दिनुहोस्
ब्लुटुथ उपलब्ध छैन मलाई देखा पर्‍यो, तर यसले सर्टकटको साथ मलाई डिबग विकल्प देखाउँदैन, त्यहाँ अर्को तरीका छ?
कारलाई जवाफ दिनुहोस्
नोर्बे फिलीप लोपेज अविला भन्यो
शुभ अपरान्ह साथी, के उनीहरूले तपाईंलाई यस समस्याको समाधानको बारेमा जानकारी दिए? त्यो मलाई पनि हुन्छ।
Norbey Felip Lopez Avila लाई जवाफ दिनुहोस्
लुइस सान्डा भन्यो
नमस्कार, यसले ब्लुटुथले उपलब्ध छैन भन्छ, तर यसले मलाई डिबग विकल्प देखाउँदैन, त्यहाँ अर्को तरीका छ? धन्यवाद
लुइस सान्दालाई जवाफ दिनुहोस्
के हुन्छ यदि एप्पल मार्च २ on मा हार्डवेयर उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्दैन?
हामी अब एप्पल पे प्रयोग गर्न सक्छौं हाम्रो मोडेल3रिजर्व गर्न